Feature image for Iibsiga Caymiska Baabuurka
Daboolida caymiska aan ku filnayn:waay bixisaa kharashyadaada caafimaadka ka dib markaad isticmaashay dhammaan dheefahaagii “PIP” iyo marka darawalka kale masuuliyada shilka guudka laga saaray laakiin aanu daboolin caymisku. Daboolida Ikhtiyaarka ah
Waydiiso jarjaris sare: jarjaristu waxay ka dhigantahay qadarka aad bixiso ka hor inta aanu xeerkaagu bilaaban. Jarjarista sare waxay hoos u dhigi kartaa qadarka caymiska si wax ku ool ah. Yaree daboolida baabuurta hore: ma samayn karto macno in la hayo daboolida ikhtiyarka ah sida shilka ama mid dhammaystiran.
Joogtee buundo wanaagsan: marka caadooyinka wadista baabuurku ay yihiin habka ugu wanaagsan ee lagu yareeyo kharashkaaga caymiska, hagaajinta waxyeelada buundada qiimayntu waxay kaa caawin kartaa ku jirida iyo ka maqnaanta jidka. Go’aan ka gaadhida qiimahaaga
Sharciga Minnesota 65B.49 Biennial Limits waxay uga baahantahay Guddoonka Si uu u habeeyo Xadadka Masuuliyada Tooska ah ee lagu Dabaqo Mulkiilayaasha Baabuurta la kiraysto sanad kasta oo kale. Halkan waxa ah lambarada cusub, ee dhaqan galka noqoneysa 1/1/2017. Xadadka masuuliyada aan Tooska ahayn ee Lagu dabaqo Mulkiilayaasha Baabuurta La kiraysto
Taariikhda Dhaqan galka
Dhaawaca jidhka ee hal qof
Dhaawaca jidhka ee shilka
Guddoomiyaha waxa uu ku dhawaaqi doonaa oo daabici doonaa, xiliga ama ka hor Sebtambar 30 sanadka ka horeeya, isbeddelada qadarka doolarka uu tuducan u baahanyahay inuu dhaqan galo Janaayo 1 mid kastoo ah sanadaha tirooyinka kinsida ah leh. Guddoomiyahu waxa uu isticmaali doonaa dib ugu noqoshadii u dambaysay ee lifaaqa Juulay ee la heli karo Sebtambar 1. isbeddelada qadarada doolarka ah waa in loo kordhiyaa $5,000, oo wax isbeddel ah laguma samayn doono qadarka doolarka ilaa isbeddelka lifaaqu u baahanyahay ugu yaraan beddel $5,000. Footer contents